TV Fashiliyey Siraha Kulammo 5-tii sano ee u dambeeyey Guddiga ilaalinta Hantida Qaranka |
TV Fashiliyey Siraha Kulammo 5-tii sano ee u dambeeyey Guddiga ilaalinta Hantida Qaranka
“Guddida Dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada oo Sida Fiinta uga qayliyay Barnaamij ka baxay TV-ga Bulsho”
Hargeisa(GNN):-Guddiga Dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa si adag uga hadlay Fillim Dhukumentari ah oo habeen-hore laga baahiyey TV-ga Bulsho, Barnaamijkaas oo ka hadlayey Hay’adaha dawladda ee Guddigu la kulantay muddada ay jirtay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo iyo Hay’ad kasta oo dawladeed marka ay la kulmaan waxyaabihii ay ka wadahadleen.
Guddoomiyaha Guddiga Dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaranka Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi (Obama), ayaa sheegay in ay Fillimkaas ka baxay TV-ga Bulsho aad uga xumaadeen markii ay arkeen Xayeysiinta Barnaamijka oo ka socday Shaashadda Telefishanka Bulsho. Waxaanu sheegay inaanay jirin wax xog ah oo dhukumentigaa ku saabsan oo ay siiyeen TV-ga iyo wax Guddi ahaan laga weydiiyey toona.
Fillimkaas Dhukumentariga ah ee ka baxay Bulsho TV, ayaa ka warramaya Hay’adaha dawladda ee Guddiga Dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaranku la kulmeen muddadii ay Xukuumadda Siilaanyo jirtay. Waxaanu Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi sheegay inaanu garanayn cidda siisay Fillimka TV-ga, balse uu gacantooda ku galay Sifo khaldan, isagoo xusay in marka ay la shirayaan Masuuliyiinta Hay’adaha dawladda ay la yeeshaan kulammo ay albaabbadu u xidhan yihiin Saxaafadduna dibed-joog ka tahay.
“Maalmahan waxa soo baxayey oo ilaa shalay aanu arkayney TV-ga Bulsho oo xayeysiinaayey Barnaamij aan annagu Guddi ahaan leenahay oo uu soo Bandhigay kulammadii kala jaad-jaadka ahaa ee ay la yeesheen Guddiga daba-galka Hantida Qaranku Xukuumadda ama Wasaarado kala geddisan. Waxaannu qabnaa Dhukumenigaa iyo Muuqaalkaas ay haystaan ee ay heleen inuu sifo qaldan u soo galay gacantooda.” ayuu yidhi Guddoomiyaha Guddida Dabagalka Iyo ilaalinta Hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland.
Guddoomiyaha Guddida dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaran ee Golaha Wakiillada oo shalay magaalada Laascaanood kula hadlay Saxaafaddu waxa uu ku dooday mar haddii uu TV-gu helay xogtan in aanu u adeegsan sifo khaldan, isagga oo aan waxba ka weydiin cidda ay khusayso, waxaanu yidhi; “Waxaannu siinnay haba-yaratee ma jirto. Waxaan Annagu qabnaa inay khaldan tahay, waxaan annagu qabnaa inay anshaxa Saxaafadda u yaalla iyo hab-dhaqameedka Saxaafadda ay ka baxsan tahay in xog aad heshay oo aanad weydiin ciddii lahayd Wasaaradda ha noqoto ama annagaba (Guddi ahaan) ha noqoto aad sii deyso.”